India Vashanyi Vanoshanda: Maitiro ekuwana US $ 400 bhiriyoni mukutengesa kunze
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India Vashanyi Vanoshanda: Maitiro ekuwana US $ 400 bhiriyoni mukutengesa kunze
Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
India vashanyi vekushanya pamusangano wevashumiri
Mazano akati wandei akapihwa neIndia Association yeVashanyi Vanoshanda (IATO) mumusangano wakadaidzwa negurukota reMubatanidzwa neImabhizimusi, Shri Piyush Goyal, kuti vatore pfungwa kubva kune vanoburitsa kunze kwenyika nezvenzira dzinodiwa dzinofanira kutorwa pakudanwa kwaMutungamiriri kuti vawedzere kutengeswa kwenyika. kuenda kuUS $ 400 bhiriyoni gore rino uye kuendesa India kuUS $ 5 trillion hupfumi mune ramangwana.
Nhanho senge kuvhura e-vashanyi mavhiza uye kutangazve zvakajairika epasi rose kufambisa ndege kwaive pamusoro pechinyorwa.
Zvakare zvakakumbirwa ndezvekuti Sevhisi Yekutengesa Kunze kubva kuIndia chirongwa chinofanira kuenderera kwemakore anotevera mashanu uye kuverengerwa muchirongwa cheRoDTEP mune mutemo wezvekutengeserana wekunze.
Chirongwa ichi chakanangana nekudzoreredza vanotengesa kunze kwenyika, mabasa, mitero, uye maRevi anobhadharwa navo kuCentral, nyika, uye nharaunda.
Kumiririra indasitiri yekushanya, Rajiv Mehra, Mutungamiri we Indian Association yeVashanyi Vanoshanda (IATO), akakurudzira matanho senge kuvhura e-vashanyi maviza, kutangazve kwakajairika ndege dzenyika, nezvimwewo. Akaudzawo Gurukota nezve mamiriro ezvinhu emari akange akaitwa nevashanyi panguva yedenda uye kuburitswa kweSEIS yakanonoka (Service Export kubva India Scheme) yegore remari 2019-20 yakakosha pakurarama kwavo.
Mr. Mehra vakawedzera kukumbira kuti Sevhisi Yekutengesa kunze kwenyika kubva kuIndia chirongwa ichi chienderere mberi kwemakore mashanu anotevera uye chinofanira kuverengerwa muchirongwa cheRoDTEP mubumbiro rezvekutengeserana nedzimwe nyika rakaumbwa muna 5-2021. Chirongwa ichi chakanangana nekudzoreredza vanotengesa kunze kwenyika, mabasa, mitero, uye maRevi akabhadharwa navo kuCentral, nyika, uye nharaunda, uye inongovhara zvikamu zviviri kubva muzvitatu, 26% yekutengeswa kwenyika.
Mutungamiri weIATO akataura zvakare kuna Minister kuti indasitiri yekushanya ndiyo inonyanya kutora mari yekunze uye nekudaro inofanirwa kupihwa chinzvimbo chekuonekwa semutengesi kunze kwevashandi vekunze vanotengesa. Kufamba kwakadai kunogona kusimudzira kukwikwidza kwavo kune dzimwe nyika dzakavakidzana uye nekudaro kunogona kusimudzira vashanyi vekunze, akadaro.
Kupfuurirazve, zvakakumbirwa neMubatanidzwa weGurukota rezveMabhizimusi nemaindasitiri kuti zviitwe zveIntegrated Goods and Services Mutero (IGST) zviitwe apo vashanyi vanobva kuIndia vane kodzero yekudzoserwa IGST yakabhadharwa muIndia pazvinhu zvinoburitswa muIndia. pasi peMutero Wadzoreredza Vashanyi (TRT) chirongwa.
Va Mehra vakati, "Kubva padanho hombe, India ine mikana yakakura yekushanya, asi kuti tisvike ipapo tinoda rutsigiro rwehurumende maererano nemari yekukurudzira pamwe nekuvandudza zvivakwa. Hurumende dzichitarisa mukukwezva kukwezva kweIndia, ndine chokwadi chekuti tichaona kukura sezvatisati tamboona. ”